को हुन्, नेकपा सोलुका अध्यक्ष मानवीर राई ? – Himal FM 90.2 MHz
को हुन्, नेकपा सोलुका अध्यक्ष मानवीर राई ?
स्थानिय समाचार adminhimal April 22, 2019
तत्कालिन एमाले र माओबादीबीच पार्टी एकता टुंगोमा पुगेपछि पनि मानवीर राई नेकपा सोलुखुम्बुको अध्यक्ष बनेका छन् । केन्द्रिय नेतृत्वले टुंगो लगाएको जिल्ला अध्यक्षमा राई र सचिब गोम्बु शेर्पा ‘कज्र्याङ’ बनेका छन् । राई पुर्व एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष हुन् भने शेर्पा पुर्व माओबादीका तत्कालिन अध्यक्ष थिए ।
२०४२ सालबाट खरिखोला निमाविको प्रारम्भिक कमिटी (अनेरास्ववियू)बाट राजनितिक यात्रा शुरु गरेका राईले २०४६ सालपछि अखिल नेपाल किसान संघमा आबद्ध भएर काम गरे । बहुदल आउनुपुर्व विद्यार्थी जीवनमा प्रहरीको निगरानी समेत खेपेका उनी २०४८ सालमा भएको पहिलो जिल्ला अधिबेशनबाट पाटीको उपसचिबमा निर्वाचित भए । उनले लगातार तेस्रो अधिबेशनसम्म उपसचिब भएरै जिम्मेवारी निर्वाह गरे ।
चौथो अधिबेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटीमा समाबेश नभएका मानवीर पाटीका अन्य नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिलाउनकै लागि कमिटी भन्दा बाहिर बसेर राजनितिमा सक्रिय भईरहे । २०६६ सालमा सम्पन्न पाँचौ जिल्ला अधिबेशनबाट निर्वाचित आङङिमा लामा नेतृत्वको कमिटीमा उपाध्यक्ष पदमा रहेर काम गरे । २०७० सालमा अध्यक्ष लामा संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेद्धार बनेपछि राईले करिब दुई बर्ष कार्यवहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले । २०७२ भदौमा भएको छैठौ जिल्ला अधिबेशनबाट राई पहिलोपटक नेकपा एमालेको जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित बने ।
२०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा साविकको बासा गाविसबाट वडा सदस्य र्निविरोध बनेका राई जिल्ला विकास समितिको सदस्यमा समेत निर्वाचित बने । आदिबासी जनजाति समन्वय समितिको उपाध्यक्ष र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका सदस्य समेत भएर काम गरिसकेका राईले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बाम गठबन्धनको निर्वाचत परिचालन कमिटीको संयोजक बनेर दुई प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बाम उम्मेद्धारहरुलाई विजयी गराउन मुख्य भूमिका खेलेका थिए ।
पाटी एकिकरणपछि नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष बनेका राईले पाटीका नेता तथा कार्यकर्तालाई एकैथलोमा राखेर पाटीको वर्तमान साखलाई जोगाईराख्न तर्फ आफ्नो ध्यान जाने बताए । राई माप्य दुधकोशी गाउँपालिका २ बासामा वि.स. २०२७ सालमा बुबा आस बहादुर र आमा जतनमाया राईको कोखबाट अन्तरे (पाँचौ) छोराको रुपमा जन्मेका हुन् ।